သင့်ရဲ့အခွင့်အရေးကိုသိပါ - ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ၏ခငြ့်အရေး | အဆိုပါခိုလှုံရာရေးစင်တာအွန်လိုင်း | ဒုက္ခသည်စင်တာအွန်လိုင်း
ဤအချက်အလက်သည်သင်၏အခွင့်အရေးများအကြောင်းကိုပညာပေးဖို့ရည်ရွယ်သည်. ဒါဟာဥပဒေကြောင်းအရအကြံဉာဏ်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမည်သည့်လမ်းအတွက်မဖြစ်သင့်. လူတွေကြောက်ပြင်ဆင်မခံရဖို့အဘို့အကျွန်ုပ်တို့၏ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်.
non-U.S. နိုင်ငံသားများ, အေပျအမြဲတမ်းနေထိုင်သူများအပါအဝင်, ဒုက္ခသည်များနှင့် asylees, ယေဘုယျအားဖြင့်နိုင်ငံသားများကဲ့သို့တူညီသောအခွင့်အရေးရှိသည်.
သင်သို့မဟုတ်သင့်မိသားစုဝင်များအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေအစဉ်အရောက်နေတယ်ဆိုရင်, ချက်ချင်းဖုန်းဆက်ပါ 911.
ကျနော်တို့ခက်ခဲကာလ၌နေထိုင်နေကြ. ဒုက္ခသည်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဆန့်ကျင်မကြာမီကလုပ်ရပ်များ, အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိဒုက္ခသည်များနှင့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူအများအပြားဘို့ကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်မှုများဖန်တီး. လူတိုင်းအခွင့်အရေးများရှိပါတယ်, ဒုက္ခသည်တွေအပါအဝင်, ခိုလှုံခွင့်တောင်းခံ, asylees, ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ, အေပျအမြဲတမ်းနေထိုင်သူ (အစိမ်းရောင်ကဒ်ကိုင်ဆောင်သူ), U.S. နိုင်ငံသားများ, နှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွက်တစ်ဦးချင်းစီအဆင့်အတန်းမရှိဘဲ.
ငါတို့ရှိသမျှသည်ဂုဏ်သိက္ခာနှင့်ရိုသေလေးစားမှုနဲ့ကုသခံရဖို့ထိုက်, မသက်ဆိုင်ကျနော်တို့အနေဖြင့်သို့မဟုတ်ကြှနျုပျတို့ဆုတောငျးပုံကိုဘယ်မှာ၏. ငါတို့ရှိသမျှသည်အခွင့်အရေးရှိသည်. ဤသည်သယံဇာတအရေးတကြီးလိုအပ်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူဒုက္ခသည်တွေပေးဖို့ရည်ရွယ်သည်. သင် ... ရမည် သင့်အခွင့်အရေးများကိုသိ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းရင်ဆိုင်နေရတဲ့အရေးကြီးသောကိစ္စများမှတုန့်ပြန်. ဤသည်သယံဇာတဥပဒေစိုးမိုးရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ကွောကျရှံ့ခွငျးကိုဖန်တီးရန်ရည်ရွယ်သည်မဟုတ်. ကြောင်းအရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုပုဂ္ဂိုလ်များနားလည်ရန်အရေးကြီးပါသည်ဒါဟာဖြစ်ပါသည် (ရဲတပ်ဖွဲ့, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များ, နှင့်မီးသတ်သမား) အရေးပေါ်အတွက်မဆိုလူတစ်ဦးကိုကူညီရရှိနိုင်ပါ. အမြဲတမ်းမခေါ် 911 အရေးပေါ်အတွက်. သင့်အခွင့်အရေးများကိုသိ - ဒုက္ခသည်အခွင့်အရေးများ.
စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး၏ဖက်ဒရယ်ဗျူရိုကနေအေးဂျင့်များ၏အစီရင်ခံစာများရှိခဲ့သည် (FBI က) နှင့် / သို့မဟုတ်အမိမြေလုံခြုံရေးဌာန (DHS) သူတို့ကိုပြောပြရန်သွားရောက်ခြင်းဒုက္ခသည်များ '' အိမ်များ.
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဘက်တော်သားသို့မဟုတ် FBI ကတစ်ရမ်းမပါဘဲသင့်အိမ်ထဲသို့မသွင်းနိုင်ပါတယ်. တစ်ရမ်းတင်ပြလျှင်, ရက်စွဲနှင့်လက်မှတ်စစ်ဆေး. ဒါကြောင့်တရားသူကြီးတစ်ဦးကလက်မှတ်ရေးထိုးနဲ့ရက်စွဲတရားဝင်သည်လျှင်, သင်သည်ထိုသူတို့အတွက်ပါစေရမယ်နဲ့တိတ်ဆိတ်စွာနေရန်သင့်ညာဘက်တငျပွနိုငျ. တစ်ရမ်းတင်ဆက်မပါရှိဘူးဆိုရင်, သင်သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ဦးအတွက်သူတို့ကိုဖိတ်ခေါ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူတို့သာအတွက်လာနိုငျ.
အမေရိကမှာ, သငျသညျနှုတျဆိတျဖြစ်ခြင်းနှင့်ရဲမှဘာမှမပြောပိုင်ခွင့်ရှိသည်. သငျသညျလုပ်နိုင်တဲ့ပြောပါနှင့်တရားရုံးတွင်သင်တို့တဘက်၌အသုံးပြုပါလိမ့်မည်ဘာမှ. သင်ကအေးဂျင့်ပြောပြနိုင်, “ငါပဉ္စမပြင်ဆင်ရေးတရားတွေ့” နှင့်စကားမပြောတတ်ကြဘူး.
သင်တစ်ဦးလိုလားသူ Bono ရှေ့နေအပေါ်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည် Immigrationlawhelp.org. ဒါမှမဟုတ်သင်ကသင်၏ခေါ်နိုင်ပါတယ် ဒေသခံ ACLU.
တစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရှေ့နေ Get. လည်း, သင်တို့အဘို့ထောက်ခံရန်သင့်အသိုင်းအဝိုင်းမေးဖို့. သငျသညျထိန်းသိမ်းခံနေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျအာမခံရနိုင်မည်အကြောင်းနှင့်ဖြန့်ချိလိမ့်. မျှော်လင့်ချက်စွန့်လွှတ်မထားပါနဲ့.
ငါဆဲ U.S ပြင်ပတွင်သွားလာနိုင်သလား. ဒုက္ခသည်အဆင့်အတန်းတစ်ခုသို့မဟုတ်အစိမ်းရောင်ကဒ်နှင့်အတူ?
ဆီးရီးယား - ကျနော်တို့ခြောက်လနိုင်ငံများမှတဦးချင်းစီအကြံပြု, အီရန်, ဆူဒန်, ဆိုမာလီယာ, ယီမင်နှင့်လစ်ဗျား - ဤအချိန်တွင်သွားလာကြဘူး, ဒါဟာအလွန်အရေးတကြီးသို့မဟုတ်အရေးပေါ်ဖြစ်ပါသည်မဟုတ်လျှင်.
သင်သို့မဟုတ်သင့်ရဲ့ချစ်ရသူအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုပြင်ပမှာဖြစ်ကြောင်းနှင့်ပြန်လာဖို့စီစဉ်နေတယ်ဆိုရင်, သင်သည်သင်၏ခရီးစတင်မတိုင်မီဒီမှာအမေရိကန်အတွက်ရှေ့နေကိုဆက်သွယ်သင့်တယ်. ခရီးသွားလာအဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့စာရွက်စာတမ်းများရှိသည်ဖို့သေချာအောင်သင့်တယ်, တစ်ဦးနိုင်ငံကူးလက်မှတ်အပါအဝင်, အစိမ်းရောင်ကဒ်, သို့မဟုတ်ဒုက္ခသည်ခရီးသွားစာရွက်စာတမ်း.
လုပျတဲ့သူဒုက္ခသည်များ မဟုတ် အစိမ်းရောင်ကဒ်သို့မဟုတ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားများ ခရီးမသွားသင့်တယ် မည်သည့်အကြောင်းပြချက်အဘို့ဤအချိန်တွင်အမေရိကန်ပြင်ပတွင်, သငျသညျခွောကျအမည်ရှိနိုင်ငံများမှမဟုတ်ရင်တောင်.
လေဆိပ်မှာနှင့် entries တွေကိုများ၏ဆိပ်ကမ်းဥပဒေဘက်တော်သားအရာရှိအားလုံးအိတ်တစ်ဦး "လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ရှာဖွေရေး" လုပ်ဆောင်သွားရန်နှင့်သင့်နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်နှင့်ခရီးသွားလာခရီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေမေးမြန်းဖို့အခွင့်အာဏာရှိ. သငျသညျလေဆိပ်မှာအလယ်တန်းအင်တာဗျူးအတွက်ရွေးချယ်နေတယ်ဆိုရင်, သင်တစ်ဦးရှေ့နေတောင်းခံပိုင်ခွင့်ရှိသည်. အတော်များများကရှေ့နေများကဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့အတာဝန်ခံအခမဲ့သူတို့ကိုယ်သူတို့မရရှိနိုင်လုပ်နေပါတယ်.
သင်သို့မဟုတ်သင်သိတစ်စုံတစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလျှင်, သငျသညျဆက်သွယ်သင့်: airport@refugeerights.org, သင့်ရဲ့မခေါ် ဒေသခံ ACLU, အသုံးပြုဖို့သင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုအကြောင်းကိုသတင်းပို့ ဤပုံစံ.
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌သင်တို့၏ဒုက္ခသည်အဆင့်အတန်းထောက်ပံ့ငွေကိုသင်ဥပဒေရေးရာ status ကို, သငျတို့သကိုအမေရိကန်နိုင်ငံသားများကဲ့သို့တူညီသောကုသမှုခံယူပိုင်ခွင့်ရှိသည်.
သင့်ဒေသခံရဲအသိုင်းအဝိုင်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ်သငျသညျအစေခံခြင်းနှင့်သင်ကလိုအပ်တဲ့အခါသင်အကာအကွယ်ပေးရန်ရှိပါသည်. သင်တစ်ဦးရာဇဝတ်မှုများ၏သားကောင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်, သငျသညျခကျြခငျြးရဲမခေါ်သင့်တယ်: 911.
သင်အန္တရာယ်ဖြစ်ကြောင်းခံစားရလျှင်, သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ဦးကိုသင်သို့မဟုတ်သင့်မိသားစုဆန့်ကျင်ခြိမ်းခြောက်မှုများအောင်ပြုလုပ်လျှင်, မလုပ်ပါနှင့် သူတို့ကိုစကားပြောသို့မဟုတ်သူတို့ကိုထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရန်ကြိုးစား. သငျသညျခကျြခငျြးခေါ်ဆိုမှုများကရဲကိုမခေါ်သင့်တယ် 911.
သငျသညျကိုယုံပါလျှင်သင်သို့မဟုတ်သင်သိသူတစ်ဦးဦးသောကွောငျ့သင့်ရဲ့ဘာသာရေးကိုတစ်ရာဇဝတ်မှုတစ်ခုသားကောင်ဖြစ်ခဲ့သို့မဟုတ်ခွဲခြားဆက်ဆံခဲ့ပါသည်, အမျိုးသား, သို့မဟုတ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်, သငျသညျအစမှာသတင်းပို့သင့်တယ်: https://www.splcenter.org/reporthate.
သတိရ: ခေါ်ဆိုခ 911 သင်သို့မဟုတ်သင်သိတစ်စုံတစ်ဦးကိုအန္တရာယ်လျှင်.
သင်သည်သင်၏ဘာသာတရားကိုကျင့်သုံးမယ့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာပိုင်ခွင့်ရှိသည်. သငျသညျကိုးကှယျမှုတစ်ခုအရပ်သို့သွားခွင့်ရှိသည်, တရားဒေသနာနှင့်ဘာသာရေးပို့ချချက်တက်ရောက်ရန်နှင့်နားမထောင်, အသိုင်းအဝိုင်းလှုပ်ရှားမှုများတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်, နှင့်အများပြည်သူအတွက်ဆုတောင်းပဌနာ. သငျသညျဘာသာရေးခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေ့ကြုံခံစားသို့မဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘာသာတရား၏ပစ်မှတ်ထားနေတယ်ဆိုရင်, သငျသညျကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ် ယခုအချိန်တွင်.
ဒုက္ခသည်တစ်ဦးအဖြစ်, သင်တစ်ဦးသည်အလွန်အရေးကြီးသောထောက်ခံသူဖြစ်ကြောင်း. သငျသညျဒုက္ခသည်တစ်ဦးဖြစ်သောကြောင့်ကိုယ်တော်၏အသံကိုကျွန်တော်တို့သည်ကြီးစွာသောသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါသည်. သငျသညျပိုင်ခွင့်ရှိသည်:
Call နှင့်သင့်မြို့မှာရွေးကောက်တင်မြှောက်အရာရှိများနှင့်တွေ့ဆုံရန်, ပြည်နယ်, နှင့်ကွန်ဂရက်အတွက်ဆက်ဆံရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့, ရပ်ရွာရန်သင့်အလှူငွေအကြောင်းကိုသူတို့ကိုပညာပေး, သငျတို့သဂရုစိုက်ဒုက္ခသည်ပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့်ပြဿနာများကိုအဘို့မိမိတို့ထောက်ခံမှုရှာအံ့သောငှါ.
ထိုကဲ့သို့သောပြန်လည်နေရာချထားရေးန်ထမ်းအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားအသံ join, ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ခေါင်းဆောင်များ, အလုပ်ရှင်များ, စစ်ရေးစစ်ပြန်, သည်အခြားဒုက္ခသည်ခေါင်းဆောင်များ, နှင့်ထောက်ခံအသိုင်းအဝိုင်းအဖွဲ့ဝင်အတူတကွအရေးယူ.
သငျသညျသေးနိုင်ငံသားမဟုတ်နှငျ့သငျအဖမ်းခံရတစ်ခုသို့မဟုတ်ရာဇဝတ်မှုစွပ်စွဲနေတယ်ဆိုရင်, သင့်ရဲ့ရှေ့နေဘာလို့လဲဆိုတော့သင့်ရဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး status ကိုနားလည်သေချာအောင် အသေးစားပြစ်မှုများကို non-အမေရိကန်နိုင်ငံသားများအဘို့အပြည်နှင်ဒဏ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်. တစ်ဦးအသနားခံ bargain ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်အပြစ်ရှိတောင်းပန်သင့်ရဲ့ဥပဒေရေးရာ status ကိုထိခိုက်နိုင်ပြီးနောက်ဆုံးမှာဖယ်ရှားရေးဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်.
သင်သည်သင်၏စံချိန်အပေါ်တစ်ဦးရာဇဝတ်ပြစ်မှုထင်ရှားရှိပါက, ဒါကြောင့်သင်တို့ရှိသမျှကိုသင်၏ရွေးချယ်မှုများနားလည်ရန်ရှေ့နေကိုဆက်သွယ်ကြောင်းအကြံပြုသည်. သငျသညျမှာ "ဖယ်ထား" သို့မဟုတ်သင့်ရဲ့ခံယူချက် "ဖျက်မှု" get နိုင်ကြသည်ဆိုပါက, ဒီကသင်၏စံချိန်ကိုရှင်းလင်းနိုင်, ဒါပေမယ့်ဥပဒေများကိုတစ်ခုချင်းစီကိုပြည်နယ်အတွင်းရှိကွဲပြားခြားနားကြသည်, ဒါကြောင့်ဒီမေးခွန်းတွေကိုအကြောင်းကိုရှေ့နေတိုင်ပင်ဖို့အကောင်းဆုံးက.
FBI ကသို့မဟုတ် DHS ကနေအေးဂျင့်သင်နှင့်အတူစကားပြောရှာကွပါစ. သငျသညျတွေ့ဆုံမေးမြန်းခံရဖို့ကျဆင်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်, သို့သော်ဤသံသယတွေနဲ့ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်. အင်တာဗျူးတောင်းဆိုမှုကိုအကြောင်းကိုပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးအေဂျင်စီမှသင်၏ရှေ့နေသို့မဟုတ်ကိုယ်စားလှယ်စကားပြော.
သငျသညျတခုရှေ့နေပစ္စုပ္ပန်ရှိသည်ဖို့ခွင့်ရှိသည်. မှာဥပဒေရေးရာန်ဆောင်မှုကိုရှာပါ https://cliniclegal.org/directory သို့မဟုတ် ကို http://www.ailalawyer.org/.
သင့်ရဲ့အင်တာဗျူးစဉ်အတွင်းမည်သည့်မှားယွင်းသောသတင်းအချက်အလက်ကိုမပေးပါဘူး. သင်ကိုမေးမြန်းနေကြသည်အားလုံးမေးခွန်းများကိုဖြေကြားရန်မလိုပါ, သငျသညျအဆင်ပြေမဟုတ်ပါလျှင်.
သင့်မိသားစုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအမေရိကန်မှပြန်လည်နေရာချထားခံရဖို့အတှကျအသငျသညျစောင့်ဆိုင်းနေတယ်ဆိုရင်, ဒါကြောင့်ကြာကြာယူစေခြင်းငှါ, ဒါပေမဲ့သူတို့နေဆဲပြန်လည်နေရာချထားရေးလျှောက်ထားရန်တူညီသောအခွင့်အရေးရှိသည်.
သတိရ: သင်သည်သင်၏အင်တာဗျူးစဉ်အတွင်းမှားယွင်းသောသတင်းအချက်အလက်ကိုပေးမထားရပါ. ဒါဟာရာဇဝတ်ပြစ်မှုထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်နှင့်အပျက်သဘောအကျိုးဆက်များဖြစ်ပေါ်စေမည်.
Entrapment တစ်ဥပဒေစိုးမိုးရေးအရာရှိပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ရင်ကျူးလွန်ဖို့မဖြစ်နိုင်ခဲ့ကြပေမည်တဲ့ရာဇဝတ်ပြစ်မှုကျူးလွန်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး induces မထွက်ရတဲ့အလေ့အကျင့်ဖြစ်ပါတယ်. လျှို့ဝှက်ထောက်လှမ်းရေးတာဝန်အေးဂျင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်မွတ်စ်လင်သို့မဟုတ်လူဝင်မှုအသိုင်းအဝိုင်းစောင့်ကြည့်စေခြင်းငှါကတည်းက, အစဉ်အမြဲအခွအေနေအသိအမြင်နှင့်ဝိညာဏ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အရေးကြီးသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်, သင့်ရဲ့တန်ဖိုးများကိုမှစစ်မှန်တဲ့ကိုင်, နှင့်တရားမဝင်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းလှုပ်ရှားမှုများသို့ဖျားယောင်းမရ.
သင်နှင့်သင့်မိသားစုများစောင့်ကြည့်အချို့ကိုပုံစံကိုခံစားရစေခြင်းငှါ. စောင့်ကြည့်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာသတင်းအချက်အလက်စုဆောင်းရန်နှင့်နည်းစနစ်သုံးမျိုးခွဲခြားနိုင်ပါသည်: လျှို့ဝှက်, ပေးခြင်း, နှင့်အီလက်ထရောနစ်စောင့်ကြည့်:
လျှို့ဝှက် တစ်ဦးချင်းစီသူတို့အပျေါမှာတစ်စုံတစ်ဦးကိုစုဆောင်းသတင်းအချက်အလက် detect မတတျနိုငျအခါစောင့်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်. ဒါကအကွာအဝေးကနေတစ်ဦးချင်းစီတွင်အောက်ပါတို့ကလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်, အများပြည်သူပိုင်ဆိုင်မှုကျန်ကြွင်းအမှိုက်သရိုက် receptacles မှတဆင့်ရှာဖွေ, နှင့်စကားစမြည်တွင်နားထောင်ရန်မိုက်ခရိုဖုန်းကို အသုံးပြု..
ပေးခြင်း စောင့်ကြည့်မြင်နိုင်သည်နှင့်အများဆုံးမကြာခဏဒုက္ခသည်အသိုင်းအဝိုင်းများကအဘယ်အရာကိုအစီရင်ခံတင်ပြလျက်ရှိသည်နေသည်. စောင့်ကြည့်၏ဤအမျိုးအစားတံခါးများပေါ်တွင်ခေါက်နှင့်မေးခွန်းများမေးခြင်းဖြင့်ပြည့်စုံစေနိုင်သည်, ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးအိမျနီးခငျြးတို့ပြောနေတာ, စသည်တို့ကို.
အီလက်ထရောနစ် စောင့်ကြည့်အင်တာနက်စောင့်ကြည့်အာရုံစိုက်, က်ဘ်ဆိုက်စာမျက်နှာများ, နှင့်နားထောင်ခြင်း devices တွေကိုသုံးပြီး. ယေဘုယျအား, စောင့်ကြည့်ဒေသခံကအသုံးပြုတဲ့ဥပဒေရေးရာလုပ်ငန်းစဉ်တခုဖြစ်ပါတယ်, ပြည်နယ်, နှင့်ဖက်ဒရယ်ဥပဒေ. သင်စောင့်ကြည့်အောက်မှာရှိပါတယ်ခံစားရလျှင်တိကျသောဥပဒေများနှင့်စည်းမျဉ်းများကိုပြည်နယ်မှပြည်နယ်မှကွဲပြားကြောင့်ရှေ့နေနှင့်အတူစကားပြောဆိုရန်အကြံပေးသည်ကို.
မိဘများအင်တာနက်ကိုအသုံးပြုပြီးမှနေသားတကျဖြစ်ကြပြီးဘယ်လိုကလေးတွေသို့မဟုတ်လူငယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာကိုသုံးပါကိုဘယ်လိုအကြားမျိုးဆက်တစ်ဆက်ကွာဟမှုမကြာခဏရှိပါတယ်. သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်သင့်လျော်သောအင်တာနက်ဆိုက်များတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာအကြောင်းကိုသင်၏သားသမီးနှင့်ဆယ်ကျော်သက်စကားပြောနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သူတို့ကိုသင်ရှောင်ရှားရန်မျှော်လင့်ထား. အွန်လိုင်းပေါ်မှာသင့်ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက် '' လှုပ်ရှားမှုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များသွားရောက်ကြည့်ရှုသို့မဟုတ်ပြဿနာအဖြစ်ကိုရိပ်မိနိုင်အွန်လိုင်းလှုပ်ရှားမှုထဲမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်မဟုတ်သူတို့ကိုအားပေး. ရှေ့ဆက်အချိန်လမ်းညွှန်ချက်များ setting သို့မဟုတ်ပင်၎င်းတို့၏အသုံးပြုမှုကိုကန့်သတ်နိုင်သောဆော့ဖ်ဝဲကိုသုံးပြီးစဉ်းစားကြည့်ပါ (အရင်းအမြစ်များကိုကြည့်ရှု ဒီမှာ). သငျသညျကဲ့သို့သောအသုံးပွုနိုငျ apps များရှိပါသည် Teensafe ကြောင်းမိဘများဟာသူတို့ရဲ့သားသမီးရဲ့ဆဲလ်ဖုန်းလှုပ်ရှားမှုများကိုခြေရာခံကူညီပေးနိုင်ပါသည်.
သတိရ: ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုသင်သွားရောက်ကြည့်ရှုအဘယ်သို့သောအကြောင်းသတိပြုရကြမည်ရန်အရေးကြီးပါသည်က. အစိုးရကသင်အကြမ်းဖက်ဝါဒချိတ်ဆက်စဉ်းစားလို့အစွန်းရောက်အမြင်များနှင့်အတူဆိုဒ်များသို့သွားရောက်မနေပါနဲ့.
သင့်ရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်နည်းလမ်းများအကြောင်းကိုအထောက်အကူဖြစ်စေသတင်းအချက်အလက်နှင့်အရင်းအမြစ်များကိုပူဇော်သည်ဟုအများအပြားအဖွဲ့အစည်းများရှိပါတယ်, သင့်မိသားစု, နှင့်သင့်အသိုင်းအဝိုင်းအန္တရာယ်ကင်း. ကံမကောင်းသဖြင့်, ဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့်အွန်လိုင်းလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအပေါ်သည့်ကောလဟာလသတင်းများမှာနှင့်မှားယွင်းသောသတင်းအချက်အလက်ကိုလည်းရှိပါတယ်, အဖြစ်ဒုက္ခသည်အားသာချက်ယူရှာသော Scan ကိုများနှင့်အခြားရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူ. သငျသညျယုံကြည်အရင်းအမြစ်များမှသတင်းအချက်အလက်ကိုရှာသောသူတို့သေချာအောင်ကျေးဇူးပြုပြီး, အွန်လိုင်းသတင်းအချက်အလက်ရှာဖွေအထူးသဖြင့်လာသောအခါ.
American-Islamic Relations အပေါ်ကောင်စီ
အခွန်ဌာန & နယ်စပ်ရေးရာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေ Service Providers မြေပုံ
ရန်သင့်အားကျေးဇူးတင်ပါသည် ဘုရားကျောင်း World Service ဒုက္ခသည်တွေကိုကူညီဤပစ္စည်းများကိုပြင်ဆင်နေများအတွက် သင့်အခွင့်အရေးများ KNOW – ဒုက္ခသည်များ၏အခွင့်အရေး. သငျသညျကနေ PDF ကိုအဖြစ်ဤအချက်အလက်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည် Greateras1.org.